Izigidi zokuvala esikaBilliat | News24
Izigidi zokuvala esikaBilliat
Durban - IMamelodi Sundowns isikhiphe itshe lemali yalibeka eceleni ukuze ithenge umdlali weMaritzburg United ukuvala isikhala sikaKhama Billiat okuthiwa ufuna ukuhamba kule kilabhu.
Inkontileka kaBilliat neDowns iyaphela uma kusongwa isizini, kubika ILANGA.
IDowns isizame kaningi ukuba lo mdlali elule inkontileka kodwa uyanqaba. IChiefs kuvela ukuthi imeshela isinyenyela kanti lo mdlali kuthiwa usayilindisile njengoba kukhona namakilabhu ase-Europe amfunayo.
Leli phephandaba lithole ukuthi iDowns isibeke eceleni u-R6 million efuna ukuthenga ngawo u-Evans Rusike weMaritzburg. Kuthiwa uPitso "Jingles" Mosimane ongumqeqeshi weDowns uzimisele ngokuthi lo mdlali kube nguyena ovala isikhala sikaBilliat uma kungukuthi ugcina ngokuhamba.
OLUNYE UDABA: Pitso: UBilliat ufuna ukuyishiya iSundowns
Leli phephandaba lithinta uThulani "TT" Thuswa wezokuxhumana kwiDowns uthe okwamanje akukho angakuphawula ngodaba oluthinta abadlali ababafunayo ngoba isikhathi asikabavumeli.
Uthi ngodaba lukaBilliat kusathule njengoba kuyikhalenda lemidlalo yeFifa.
UFarook "Ntshebe" Kadodia ongumnikazi weMaritzburg uthi uzimisele ngokumdedela uRusike uma kukhona ozoqhamuka dnento ehambisana naye.
"Okwamanje akekho oseze kimi kodwa ngingakuqinisekisa ukuthi uRusike usendalini uma kukhona omfunayo ngingamlalela ukuthi uza nani. Uma ngigculiseka ngizomdedela," kusho uKadodia.